ဇာတ်ကားအသစ်မှာပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. | News Bar Myanmar
ဇာတ်ကားအသစ်မှာပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် D.O.
စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးပြီး​ချိန်ကစပြီး အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ကတော့ နောက်ထပ်ဇာတ်ကားသစ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးမဲ့အကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားကတော့ ထိုင်ဝမ်ဇာတ်ကားကို Korean Remake အဖြစ် ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
February 15 ရက်နေ့က EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ဟာ ၂၀၀၈ တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်ဇာတ်ကား “Secret” ကို Korean Remake အဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးရာမှာ မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်မဲ့အကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ကားကတော့ စိတ်ကူးယဥ်အချစ်ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စန္ဒရားတီးခတ်တဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပါရမီရှင်လူငယ်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာပါရမီရှင်လေးကတော့ ကျောင်းပြောင်းခဲ့ပြီး အသစ်တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းမှာပဲ ဆန်းကြယ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ပါတော့တယ်။ ထိုကောင်မလေးကတော့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့တေးသွားကို လေ့ကျင့်ရေးအခန်းဟောင်းထဲမှာ တီးခတ်နေတာကို တွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့… ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါပဲ။
D.O. ကတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင်နေရာကနေပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး မူရင်းထိုင်ဝမ်ဇာတ်ကားမှာတော့ Jay Chou က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မင်းသမီးနေရာအတွက်ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိသေးပဲ ဇာတ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Korean version ကိုတော့ Seo Yoo Min က ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး “Happiness,” “April Snow,” “You Call It Passion,” နဲ့ လက်ရှိရိုက်ကူးနေဆဲဖြစ်တဲ့ “Memories of Tomorrow” (လတ်တလောခေါင်းစဥ်) တို့နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
D.O. ကတော့ စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ “The Moon” (လတ်တလောခေါင်းစဥ်) ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ “Secret” ဇာတ်ကားကိုတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်မှာ စတင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်လို့ ဇာတ်ကားထွက်လာတဲ့အခါမှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရပါဦးမယ်။
Next Valentine's Day နေ့မှာ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းအနုပညာရှင်စုံတွဲများ »
Previous « မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် အားပေးစကားပြောလိုက်ပြန်တဲ့ Yesung ( Super Junior)